musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Inoshamisira Nyanzvi dzekufamba Kubva kuSpain
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sandals Tourism inotora vamiririri veSpain pakushanya
Ichiwedzera kuedza kwayo kushambadzira pamusika weSpain mushure memwedzi yekuvimba nekuonana nevadyidzani vayo, Tourism Seychelles nguva pfupi yadarika yakaitisa rwendo rwayo rwekutanga rwekudzidzisa boka diki revamiriri veSpain vanoita zvekufamba zveumbozha.
Vamiririri, vachiperekedzwa nemumiriri weTourism Seychelles kuSpain nePortugal, vakatorwa parwendo rweguta guru, Victoria, vachiongorora nzvimbo dzetsika nenzvimbo dzenhaka.
Chiitiko chese hachina kungowedzera ruzivo rwavo kutengesa zviri nani kwavaienda asi zvakavakanganisa ivo pachavo.
Izvi zvichave zvakanakira pavanenge vachisimudzira kwekuenda kune vatengi vavo.
Yakarongwa mukubatana neQatar Airways, Constance Hotels uye Resorts Seychelles uye nerutsigiro rwevadyidzani vekutengeserana muSeychelles, kushanya kwemazuva mashanu, kwakaitika kutanga kwaGumiguru, kwakanangana nekuwedzera kuoneka kwekuenda.
Vamiriri vasere vakaperekedzwa naMónica González Llinás, the Tourism Seychelles mumiriri weSpain nePortugal, vakatorwa parwendo rweguta guru, Victoria, vachiongorora nzvimbo dzetsika nenzvimbo dzenhaka. Vachienda kure, vakashanyira nzvimbo yeUNESCO World Heritage Vallée de Mai paPraslin pamwe nekufamba zvitsuwa. Munguva yese yekusangana kwavo nevadyidzani vakasiyana panguva yekushanya kwavo kupfupi, vamiriri veSpain vakabatwa kuravira kwemukurumbira weSeychellois mutsa.
"Mushure mekusimudzira Seychelles kune vatinoshanda navo vekuSpain, zvakava zvakanaka kuti vaone kwataienda ivo pachavo," akadaro Ms. González Llinás, vachitaura kuti chiitiko ichi ndechimwe chevamiririri, vachikurudzirwa nekunaka kunoshamisa kwezvitsuwa uye kugamuchirwa. vakagamuchira, vacharamba vachiyeuka uye kuvabatsira pakutengesa mazororo kunzvimbo yekuenda.
Akatenda vanotambira Qatar Airways, Constance Group nzvimbo dzekutandarira Ephélia neLémuria, uye makambani ekutungamira kwekuenda Mason's Travel, Creole Travel Services uye 7º South avo vakapa huwandu hwezvigadzirwa nemasevhisi kuti chiitiko ichi chibudirire.
“Tinotenda vatinodyidzana navo nekutambira maagents. Chiitiko chese hachina kungowedzera ruzivo rwavo kuti vatengese kwavanoenda zviri nani asi zvakavakanganisa ivo pachavo, izvo zvatinotenda kuti zvichavabatsira pavanenge vachishambadzira kwekuenda kune vatengi vavo, "Ms. González Llinás vakadaro.
"Pave nekuwedzera kwekuda kwe kuenda kuSychelles kubva munaKurume 2021, vagari vekuSpain pavakagamuchira mwenje wegirini kuti vaende kunzvimbo yezvitsuwa, "Ms. González Llinás akawedzera, achiona kuti 2, 296 vashanyi vakaenda kuSeychelles kubva kuSpain kusvika zvino gore rino. Iyo sosi musika yakaburitsa 4,528 vanosvika muna 2019.